Budada Hydrafinil (1689-64-1) - Soo saare & Warshad
Budada Hydrafinil іѕ kaalmo nootropic analog awood badan оf Modafinil. Hydrafinil, sidoo kale loo yaqaan…
Qalabka Hilibka Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1) video
Xashiishka Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1)
Xashiishadda Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1) waa alkahoosha khamriga ah ee fluorene. Xiddiga ugu muhiimsan ee isomer, fluoren-9-ol ama 9-hydroxyfluorene, kooxda hydroxy waxay ku taallaa dulsaar kaarboon inta u dhexeysa laba laydh oo benzene ah. Hydroxyfluorene waxaa loo rogi karaa fluorenone by oxidation. Waa muraayad cad oo midab leh oo heerkulka qolka.
Isla mar ahaantaana, budada Raw Hydrafinil (9-Fluorenol) waa wakiil wacyi gelinaya, oo ka hortagaya hurdo la'aan iyo isdifaacid. Waa falejo iyo daawada loo yaqaan modafinil (oo loo yaqaan 'Provigil') - oo ah agab ay isticmaalaan duulimaadyada Airforce on missions muddo dheer si ay u soo dhawaadaan una feejignaadaan. Hydrafinil (aka 9-Fluorenol) sidoo kale waa habka loo yaqaan 'eugeroic nootropic' kaas oo aad ugu dhow ficilka Modafinil. Waxaa asal ahaan loo soo saaray sidii xarun cilmi-baaris si kor loogu qaado wacyigelinta iyo feejignaanta. Sababtoo ah waxtarkeeda la soo sheegay sida wakiilka eugeroic, waxa uu noqonayaa mid caan ah dadka isticmaala buumotropics sare. Dhab ahaantii, dadka isticmaala waxay soo sheegaan waxyeellada yar yar ee Modafinil, laakiin awoodda weyn ee kor loogu qaadayo feejignaanta. Faa'iidooyinka kale ee la soo sheegey waxaa ka mid ah horumarinta dareenka, dhiirigelinta korodhka, dhiirigelinta xakamaynta, horumarinta garashada garashada iyo awooda lagu barto.
Dufanka Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1) Smamnuucista
Product Name Budada Hydrafinil (9-Fluorenol)
Magaca Kiimikada Hydroxyfluorene;
Fasalka Daroogada Aromatics, Daroogada deegaanka, Daroogooyinka SMART
Molecular Wsideed 182.222 g / mol
barafku Psaliid 153-156 ° C
dhibic kulayl 275.62 ° C (qiyaasta adag)
SOlubility Chloroform (Xiis), Methanol (Gaar ah)
Hydrafinil (9-Fluorenol) Application Waxaa loo adeegsadaa daawooyinka, alaabooyinka caafimaadka, cuntada, cabitaanka, qurxinta sheyga, reasiyeyaasha noolaha iyo kiimikooyinka iyo warshadaha kale.
qaydhiin Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1)
Xashiishadda Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1) waa alkahoosha khamriga ah ee fluorene. Xiddiga ugu muhiimsan ee isomer, fluoren-9-ol ama 9-hydroxyfluorene, kooxda hydroxy waxay ku taallaa dulsaar kaarboon inta u dhexeysa laba laydh oo benzene ah. Hydroxyfluorene waxaa loo rogi karaa fluorenone by oxidation.
Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1) Farsamaynta ficilada?
Habka saxda ah ee ficilku wali lama yaqaan. Si kastaba ha noqotee, qaabab badan oo suurtogal ah ayaa la soo jeediyey. Ugu horreyn, waxaa la rumeysan yahay in budada Hydrafinil (9-Fluorenol) ay u shaqeyn karto sidii dopamine reuptake inhibitor, taas oo macnaheedu yahay in uu kordhinayo heerarka dopamine neurotransmitter.
Marka labaad, waxaa la qiyaasey in Hydrafinil (9-Fluorenol) uu u dhaqmo sida serotonin 5-HT6. Receptors 5-HT6 waxay ku yaalaan habka dhexe ee neerfayaasha (CNS) waxayna u muuqataa in xannibaadkooda ay horseedi karto hagaajinta waxqabadka garashada ee barashada iyo barashada xusuusta badan. Intaa waxaa dheer, serotonin iyo nidaamkeeda ayaa door muhiim ah ka ciyaara xakameynta garashada iyo dabeecada. Sidaa daraadeed, qaar ka mid ah horumarinta dabeecadaha sahlan ee la soo sheegay ka dib isticmaalka Hydrafinil (9-Fluorenol) ayaa loo aaneeyey nidaamkan.
Faa'iidooyinka of Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1)
Kacsanaanta iyo wacyi-gelinta
Daal aad u yar iyo daal
Tamarta maskaxeed oo kor u kacday
Wax soo saar sare
talinayo Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1) Qiyaasta
Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer waa wanaagsan tahay in la bilaabo qiyaasta ugu yar ka dibna si tartiib tartiib ah u kordhi marka aad ogaatid saameyntiisa. Qaadashada caadiga ah ee budada Hydrafinil waa 50 oo ah mgmaanka 100 hal mar maalintii, qiyaasta daawada ma ka fiican tahay qiyaastaas.
Dhibaatooyinka ay keento of Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1)
Dhibaatooyinka kale ee budada Hydrafinil waa la barbar dhigi karaa. Kuwaas waxaa ka mid ah madax xanuun, iyo fuuqbax. Cabashooyinka raashin xumo ayaa sidoo kale la soo sheegay.